Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.4 dhac
Xaalad kasta ha noqoto mid aad u weyn, waxaa laga yaabaa inaysan haysanin macluumaadka aad rabto.
Ilaha xogta badankoodu waa kuwo aan dhammeystirnayn , oo macnaheedu yahay inaysan haysanin macluumaadka aad doonayso in cilmi-baaristaadu. Tani waa muuqaal guud oo ka mid ah xogta loo sameeyay ujeedo aan ahayn cilmi-baaris. Cilmi-yaqaanno badan oo badan ayaa horey u lahaa waayo-aragnimo ah oo la xariirta dhammaystir la'aanta, sida sahanka jira ee aan weydiinin su'aasha loo baahan yahay. Nasiib darro, dhibaatooyinka aan dhamaystirneyn waxay u muuqdaan kuwo aad u xaddidan xogta weyn. Marka aan waayo aragnimadayda, xogta weyni waxay u egtahay in ay ka maqan tahay saddex nooc oo macluumaad ah oo faa'iido u leh cilmi baarista bulshada: macluumaadka dadweynaha ee ku saabsan kaqaybgalayaasha, dabeecadaha kale ee platformyada, iyo xogta si ay u hawlgalaan dhismayaasha aragtida.
Saddexda nooc ee dhamaystir la'aanta, dhibaatada xogta aan dhammeystirneyn ee lagu shaqeynayo dhismayaasha aragtida waa caqabadda lagu xalinayo. Iyo waayo-aragnimadayda, badanaaba waa laga shakisan yahay. Qaab dhismeedyadu waa fikrado aan la taaban karin oo cilmi-bulshadeedku baranayaan oo ay ka shaqeynayaan qaab-dhismeed dabiici ah macneheedu waxaay soo jeedinayaan habab lagu qabsan karo dhismaha xogta la arki karo. Nasiib darro, nidaamkan fudud ee fudud ayaa inta badan soo noqda si aad u adag. Tusaale ahaan, aynu ka fekereyno inaan isku dayno inaan si taxadar leh u tijaabino codsiga muuqaalka fudud ee ah in dadka caqli badani ay kasbadaan lacag badan. Si aad u tijaabiso sheegashadan, waxaad u baahan tahay inaad cabirto "sir". Laakiin waa maxay sirta? Gardner (2011) ayaa ku dooday in ay jiraan sideed nooc oo sirdoon oo kala duwan. Miyuu jiraa nidaamyo si sax ah u cabbiri kara mid ka mid ah qaababka sirta ah? Inkastoo ay jiraan tiro badan oo shaqo oo ay sameeyaan dhakhaatiirta cilminafsiyeedka, haddana su'aalahan weli ma heystaan ​​jawaabo aan sax ahayn.
Sidaa darteed, xitaa dalab sahlan oo fudud - dadka caqli badan leh waxay kasbadaan lacag badan - waxay ku adkaan karaan inay qiimeeyaan amar ahaan sababtoo ah way adagtahay in lagu hawlgalo qaab dhismeedka curyaaminta ee xogta. Tusaalooyin kale oo ka mid ah dhismooyinka aasaasiga ah ee muhiimka ah laakiin adag tahay in la hawlgalo waxaa ka mid ah "caadooyinka", "raasamaal bulsheed," iyo "dimoqraadiyad." Cilmi-baarayaasha bulshada waxay ku baaqaan ciyaarta dhex-dhexaadinta qiyamka iyo xogta saxda ah (Cronbach and Meehl 1955) . Maaddaama liiskan kooban ee qaab dhismeedka uu soo jeedinayo, in la dhiso ansax ah waa dhibaato ah in saynisyahanno bulshadu ay ku dhibtoodaan waqti dheer. Laakiin waayo-aragnimadayda, dhibaatooyinka aasaasiga ah ee macquulka ah ayaa ka weyn marka ay la shaqeynayaan xog aan loo abuurin ujeedooyinka cilmi-baarista (Lazer 2015) .
Markaad qiimeynaysid natiijada cilmi-baarista, hal hab oo sahlan oo lagu qiimeyn karo dhismaha saxda ah waa in la qaado natiijada, taas oo inta badan lagu muujiyo qaab-dhismeedyada, iyo dib-u-muujin marka loo eego xogta loo isticmaalo. Tusaale ahaan, tixgelinayaan laba daraasad oo khayaali ah oo sheeganaya in dadka muujinaya lacag badani. Daraasadii ugu horeysay, cilmi baaristu waxay ogaatay in dadka si fiican u roonaaday imtixaanka Raven Progressive Matrices - baadhitaan caan ah oo sirdoonka falanqaynta ah (Carpenter, Just, and Shell 1990) -waxay kordhiyaan dakhliga sare ee canshuur celintooda. Daraasaddan labaad, cilmi-baaruhu wuxuu ogaaday in dadka ku jira Twitter-ka ee isticmaala erayo dhaadheer ay u badan tahay inay sheegaan magac caan ah. Labada xaaladoodba, cilmi-baarayaashu waxay sheegan karaan inay muujiyeen in dadka caqli badani ay kasbadaan lacag badan. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddii ugu horreysay ee qaab dhismeedeed ayaa si fiican u shaqeynaya xogta, halka labaadna aanay ahayn. Dheeraad ah, sida tusaalahan muujinaya, xogo badani si toos ah uma xallinayaan dhibaatooyinka iyagoo dhisi kara sharci. Waa inaad ka shakisan tahay natiijada daraasadda labaad haddii ay ku lug leedahay hal milyan oo tweets, bilyan oo tweets, ama trillion tweets. Cilmi-baadheyaasha aan aqoon u lahayn dhisida saxda ah, jaantus 2.2 waxay bixisaa tusaalayaal daraasado ah oo ka shaqeeyay qaab dhismeedka curisyada iyadoo la adeegsanayo xogta raadinta.
Jaantus 2.2: Tusaalayaal Muuqaalo Dijital ah oo loo isticmaalay in lagu fuliyo Dhismayaasha Qodobada
Dukumentiyada emailka laga soo qaato jaamacad (meta-data kaliya) Cilaaqaadka bulshada Kossinets and Watts (2006) , Kossinets and Watts (2009) , De Choudhury et al. (2010)
Waraaqaha warbaahinta bulshada ee Weibo Ka qaybqaadashada bulshada Zhang (2016)
Dukumeentiyada emailka laga helo shirkad (meta-data iyo text dhamaystiran) Xirfadaha dhaqanka ee urur Srivastava et al. (2017)
Inkasta oo dhibaatada xogta aan dhamaystirneyn ee qabashada qaabdhismeedka maskaxdu ay aad u adag tahay in la xalliyo, waxaa jira xalal caadi ah oo ku saabsan noocyada kale ee aan dhamaystirneyn: macluumaadka dadweynaha ee aan dhammeystirnayn iyo macluumaadka aan dhamaystirneyn ee ku saabsan dabeecadaha kale ee ka jira. Xalka ugu horeeya waa in la qaado xogta aad u baahan tahay; Waxaan kuu sheegi doonaa cutubka 3 markaan kuu sheego baaritaannada. Qodobka labaad ee ugu muhiimsan waa in la sameeyo waxa cilmi-yaqaanku ugu yeerayo u -adeegsiga sifooyinka isticmaalka iyo cilmi-bulsheedku waxay ku baaqaan xisaabin . Habkan, cilmi-baarayaashu waxay isticmaalaan macluumaadka ay leeyihiin dadka qaarkood si ay ula socdaan sifooyinka dadka kale. Hal saddexaad oo suurtogal ah ayaa ah in la isku daro ilaha xogta badan. Nidaamkan waxaa mararka qaar la yiraahdaa isku xidhka diiwaangelinta . Tusaaleyaal aan jeclahay habkan ayaa waxaa qoray Dunn (1946) cutubka koobaad ee waraaqda koobaad ee ugu dambeysay ee ku qoran xiriirka isku duubnaanta:
"Qof walba oo adduunka ah wuxuu abuuraa Book of Life. Buugani wuxuu ku bilaabmaa markuu dhasho wuxuuna ku dhamaanayaa dhimasho. Boggiisa wuxuu ka kooban yahay diiwaannada dhacdooyinka muhiimka ah ee nolosha. Xiriirinta diiwaanka waa magaca lagu siiyay habka loo soo uruuriyo boggaga buuggan ee mugga. "
Markii uu Dunn qoray buuggan waxa uu u malaynayay in Buugga Noloshu ay ku jiri karaan dhacdooyinka waaweyn ee nolosha sida dhalashada, guurka, furitaanka iyo dhimashada. Si kastaba ha ahaatee, hadda, macluumaad badan oo ku saabsan dadka la duubay, Book of Life waxay noqon kartaa sawir aan caadi ahayn oo faahfaahsan, haddii boggaga kala duwan (ie, raadinta farshaxannaga) waa la isku duubi karaa. Buuggan Nolosha wuxuu noqon karaa kheyraad weyn oo cilmi-baarayaasha ah. Hase yeeshe, waxaa sidoo kale loo yaqaannaa xog-ururin la xidhiidha burburka (Ohm 2010) , oo loo isticmaali karo dhammaan noocyada kala duwan ee aan caddaaladda ahayn, sida aan ku sharxi doono cutubka 6 (anshax).